Ka Hortagga Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha
Bogga ugu weyn|Ka Hortagga Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha
Sharci dejintu waxay abuurtay Xafiiska Badbaadada Hubka iyo Kahortagga Rabshadaha sanadka 2020 si loo siiyo hoggaanka gobolka oo dhan, iskuduwid iyo caawimaad farsamo si kor loogu qaado dadaallada wax ku oolka ah ee gobolka iyo maxalliga ah si loo yareeyo dhaawacyada looga hortegi karo iyo dhimashada ka dhasha rabshadaha hubka. Xafiisku wuxuu lashaqeeyaa hay'adaha dowlada, hay'adaha sharci fulinta, ururada bulshada kudhaqan iyo shaqsiyaadka ayadoo loo marayo gobolka si loo hirgaliyo siyaasadaha ku saleysan cadeynta, istiraatiijiyadda iyo waxqabadyada si loo yareeyo saameynta rabshadaha hubka ee beelaha Washington. (Ch. 43.330A RCW)
Xafiiska Ka Hortagga Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha ayaa la bilaabay Maarso 2021 iyadoo diiradda la saaray rabshadaha hubka ee bulshada. Rabshadaha hubaysan ee bulshada (sidoo kale loogu yeero reer magaalka) waxaa lagu qeexay mid halis ah, oo keeni kara rabshado dhexmara dadka dhexdooda oo ka dhaca wadada. Gudaha Washington iyo meelo kale, rabshadaha hubaysan ee bulshada ayaa saameyn baaxad leh oo aan isku dheelitirnayn ku leh bulshooyinka dakhligoodu hooseeyo iyo bulshooyinka midabka leh, iyadoo ragga da'da yar ee midabkoodu si gaar ah u nugul yihiin. Rabshadaani waxay culeys saareysaa jir ahaan, shucuur ahaan, iyo dhaqaala ahaanba qoysaska iyo bulshada guud ahaan gobolka. Rabshadaha hubka ee bulshada waa dhibaato gaar ah oo leh xalal gaar ah, xalal si wanaagsan loo dejiyay.
Adeegyada iyo howlaha Xafiiska Ka Hortagga Hubka iyo Ka Hortagga Rabshadaha waxaa ka mid ah:
Isku-dubaridka hirgelinta ka hortagga rabshadaha hub-ku-saleysan ee caddaynta iyo istiraatiijiyadda ka hortagga ee bulshada ku baahsan gobolka.
Fududeynta wadaagista macluumaadka iskudhafka iyo sidoo kale barashada asaag-faca ah kulamada, booqashooyinka goobta, websaydhada iyo wicitaanada shirarka.
Bixinta tababar iyo caawimaad farsamo oo ay ka helaan khubaro qaran aqoonsan yahay.
Aqoonsiga iyo hagaajinta ilaha xogta ee la heli karo, hababka xog ururinta iyo hababka wadaagga xogta.
Soo saarida hagitaanada hababka ugu fiican iyo qaababka tusaalaha.
Maamulka barnaamijka ka hortagga rabshadaha iyo ka hortagga hubka.
Isku-dubaridka hay'adaha gobolka.
Bisha Diseembar 2021, xafiisku wuxuu warbixin ka siin doonaa guddiyada siyaasadeed ee sharci dejinta ee ku habboon horumarkooda iyo natiijooyinka ka soo baxa falanqaynta xogta, dejinta istiraatiijiyado looga hortago rabshadaha hubka, iyo talooyinka loogu talagalay xulashooyinka siyaasadeed ee sharci dejinta.
Habka xog-wadista ee yareynta rabshadaha qoryaha
Yaraynta rabshadaha hubaysan ee bulshada ayaa u baahan siyaasado iyo xeelado ka duwan noocyada kale ee rabshadaha qoriga sida is-dilka ama rabshadaha qoyska. Xogtu waxay muhiim u tahay caawinta aqoonsiga bulshooyinka ay la kulmayaan heerar sare ee dilalka. Xafiiska wuxuu la shaqeyn doonaa jaaliyadahaas si uu isugu duwo una caawiyo hirgelinta xeeladaha ka hortagga ee ku saleysan caddeynta.
Khariidadan kuleylka waxay muujineysaa meesha ay ka badan yihiin dilalka la xiriira hubka ee Washington (oo ku saleysan degganaanshaha dhibbanaha). Xog laga helay 2016-2020. Xigasho: Washington Waaxda Caafimaadka, Xarunta Tirakoobka Caafimaadka.
Deegaanka aad dagantahay
Dekedda Grays 12
Shaxda 1: Dilka Hubka ee degmadu degto laga bilaabo 2016 ilaa 2020. Waxaa ku jira degmooyin leh 10+ kiis laga soo bilaabo 2016 ilaa 2020 (oo la cusbooneysiiyay Sebtember 6, 2021).
Sheeko ku saabsan goobta Dhexdhexaad ee Ganacsiga
Warsidaha OFSVP (Juun 1, 2021)
Jaamacadda Washington ee Qoryaha Dhaawaca & Barnaamijka Cilmi-baarista Siyaasadda
Rabshadaha Qoriga, Degmada King
Xaaladda Rabshadaha Qoryaha ee Washington, Xarunta Sharciga ee Giffords (Jan. 2020).
Shabakadda Qaranka ee Bulshooyinka Nabdoon ee Kulliyadda John Jay
Kaydka Rabshadaha Qoriga Qaranka
Maalgelinta Farogelinta: Kaalinta Halis ee Taakuleynta Heer Dawladeed | Giffords